Nolosha, La Kordhiyay - Proton California
Anigoo ah arday caafimaad oo yar oo wali raadinaya dariiqa, isbadal xoog leh oo dhacdooyin ah ayaa iga keenay qorshahaygii asalka ahaa ee barashada cilmiga shucaaca, xagga xiisaha xiisaha leh ee dhanka shucaaca shucaaca. Waxaan dalbaday deganaanshaha shucaaca ee shucaaca maalinta Oktoobar 8, 1991, waxaan ku lug lahaa dawayntii ugu horreysay ee cusbitaalka lagu daweeyo bukaanka kansarka qanjirka 'prostate'. 10,000 oo bukaan oo kansarka qanjirka ka dib ah, weligeyna dib uma eegin.
Waxbadan ayaa isbadalay ilaa waqtigaas adduunka daaweynta proton. Laga soo bilaabo horumar la yaab leh ee teknolojiyadda ayaa noo oggolaaneysa in aan daaweyno kiisas aad u qalafsan, illaa macluumaadka badan ee hadda jira ay heli karaan bukaannada doonaya in ay door firfircoon ka qaataan qorsheynta daaweynta.
Sannadkii 1986dii, waxaan xiiseynayay duulista oo bilaabay inaan duulo; waa wax aan doonayey inaan sameeyo muddo dheer. Waxaan ka helay khibrada caqli ahaan qancisa, inaanan xusin qurux marka ay ku safrayaan 20,000 cagood, meel ka sareysa dhulka, oo aan daawanayo adduunka oo dhan.
Waxa aan aad ugu mahadnaqo duullimaadka ayaa ah in aysan jirin wax hoos u dhac ah oo la xiriira imaashada laba saacadood ka hor garoonka diyaaradaha, isku-wareejinta laynka amniga ama wax ka qabashada shandadaha lumay. Hiwaayaddaydu runti waxay ii oggolaataa inaan “weyneeyo” nolosheyda, labadaba marka loo eego waqtiga aan ku qaatay wixii aan ku raaxeysanayay, iyo aniga oo igu xusaya xorriyadda aan la iloobin ee aan sameeyo.
Sidoo kale, daaweynta proton-oo leh saxda iyo kartida lagu yareynayo ama baabi'inayo waxyeelada-waxay awood u siineysaa bukaannadeenna in ay yareeyaan waqti-dhimeedka isla markaana ay noloshooda ugu badiyaan. Daaweyntu waa dhakhso, xanuun la'aan, iyo xaaladaha badankood, waxay awoodaan inay ku noqdaan maalintooda caadiga ah isla markaaba daaweynta ka dib, haddii taasi ku lug leedahay shaqada, waqtiga firaaqada, ama waqti la qaadashada qoyska.
Laakiin, taasi waa halka ay isku ekaantu ku dhamaan doonaan. Duulintu waa hiwaayad kelinimo leh. Qeybta ugu badan, aniga iyo diyaaraddayda (iyo laga yaabee marti ama labo). Markii aan ula dhaqmo bukaanka daaweynta proton, dhinaca kale, waxaa i taageeraya koox shaqsiyaad u go'ay — min dosimetrists, ilaa fisikiste, kalkaaliyeyaal diiwaangashan, farsamo yaqaanno iyo in ka badan — kuwaas oo gacan ka geysta hubinta in beedka qalinku si sax ah u meeleeyo, gudaha. milimitir burada. Isla kooxdan cajiibka ah ee dadka waxay siinayaan bukaannadeenna shuruudo aan shardi lahayn laga soo bilaabo markay soo galaan xarunteenna ilaa maalinta ay wacayaan gambaarka guusha oo ay bannaanka u baxaan.
Waxaan ku faraxsanahay in aan awood u yeesho in aan qabto waxa aan sameeyo - anigoo ka soo shaqeynaya qayb ka mid ah koox daaweynta bukaannada ugu daweyn daweynta ugu badan ee cudurka kansarka ka jirta dhulka, anoo keligey u duulaya daruuraha sare. Tikniyoolajiyadda maanta wax aan ka yaraynno waa mucjiso, maalin walbana waxaan rajeynayaa in aan bogsiiyo bukaanka oo aan soo helo qaabab cusub oo ka wanaagsan oo lagu daweeyo kansarka. Ka dib oo dhan, xadka samada.
By Borotoonada California
Awooda Lagu Qaado
Dheji faallo joojiso jawaabta